နံနံပင် | အွန်လိုင်းလယ်သမားရဲ့စားကျက် | February 2020
Apple ကသစ်ပင် melba
Apple ကသစ်ပင် Zhiguli
ပန်းသီး lungwort ၏အမျိုးမျိုး
Urals ဘို့ Apple ကအမျိုးပေါင်း
Plum ၏ Samoplodnye မျိုးပေါင်း
မော်စကိုဒေသအတွက် Klonovidnye ပန်းသီးပင်တပင်
ဆိုက်ဘေးရီးယားအဘို့ Apple ကသစ်ပင်များ
အနောက်မြောက်ဘို့ Apple ကအမျိုးပေါင်း
စိုက်ပျိုး apricot နွေဦး
အဆိုပါလီနင်ဂရက်ဒေသအဘို့ Apple ကအမျိုးပေါင်း
အလယ်မှာတီးဝိုင်းဘို့ Apple ကသစ်ပင်များ
အမျိုးပေါင်း Isabella ကနေစပျစ်ရည်ကို
စပျစ်သီး၏ Hybrid ကိုပုံစံများ
သခွားသီး၏ Parthenocarpic မျိုးပေါင်း
မွေးမြူ guinea ငှက်
Duck နှင့် Geese ဘို့ရေကန်
Power က Gosling
ဂျပန် mini ကိုလယ်ထွန်စက်
Peonies ၏အမြစ်များတစ်ဦး decoction
တရုတ် Magnolia စပျစ်နွယ်ပင်
Schisandra chinensis ၏ဓာတ်မြေသြဇာ
Motoblock Neva MB အထိ 2
မျိုးပွား apical ရှ
ဆောင်းတွင်းအဘို့အ apricots, ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ
BlackBerry Natchez အဘိဓါန်
ပြင်သစ် bean ကို
B က / y က mini ကိုလယ်ထွန်စက်
ဒီမြင့်မြတ်သောအဖျော်ယမကာ၏မိတ်ဆွေတို့ကိုစပျစ်သီးမျိုးစုံအရသာ, အရောင်နှင့်စပျစ်ရည်၏မွှေးကြိုင်သောပန်းစည်းပေါ်မူတည်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ စပျစ်ရည်ကိုအရသာ, သငျသညျအပြည့်အဝအရသာများ၏မတူကွဲပြားခြင်းနှင့်အနီသို့မဟုတ်အဖြူစပျစ်သီး၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌ငါတို့သည်သင်တို့၏စပျစ်ရည်မျှော်မှန်းရလဒ်ယူဆောင်စေရန်ဤသီးနှံ၏လူကြိုက်အများဆုံးစပျစ်ရည်ကိုအမျိုးပေါင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ကြိုးစားပါ။
Parsley - ဟင်းသီးဟင်းရွက်သို့မဟုတ်မဟုတ်လော
ဒါဟာ parsley ကြိုက်နှစ်သက်မှာမဟုတ်ဘူးသူမည်သူမဆိုကိုရှာဖွေရန်ခဲယဉ်းပါတယ်။ စည်းကမ်းအဖြစ်, ဒီစကားလုံးစပ်အစိမ်းရောင်၏စိတ်ထဲတွင်ဆက်စပ်နေသည်, သို့သော်, မည်သည့်အိမ်ရှင်မကဒီစက်ရုံ၏အမြစ်မှာ parsley တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်, ဒါမှမဟုတ်အစား, အမြစ်များအဖြစ်ရည်ညွှန်းအဘယျကွောငျ့ aboveground အပိုင်းထက်လျော့နည်းမွှေးများနှင့်အဖိုးတန်မဟုတျကွောငျးသိတယ်။ ဤအမှုအလုံးစုံပြီးအများကြီးပိုဤသုံးသပ်ချက်ကိုမှာဆှေးနှေးပါလိမ့်မည် - ဒီယဉ်ကျေးမှုကစိမ်းလန်းသော၏အခြားအမျိုးအစားများကနေမတူပုံကို၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ၏ဝိသေသလက္ခဏာများဘာတွေလုပ်နေလဲ, ဘာလဲ။
Parsley နီးပါးတိုင်းအိမ်ရှင်မသင်အကြိုက်ဆုံးဟင်းသီးဟင်းရွက်ကပိုင်ဆိုင်သည်။ ရာသီဿုံအသားနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းလျာများနှင့်ငါးနှစ်ဦးစလုံးကိုဖြည့်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးအနညျးငယျကအပေါ်အခြေခံပြီးအမြစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အမျိုးမျိုးသော tools များ၏ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများ၏အကျိုးရှိသောဂုဏ်သတ္တိများလူသိများ။ ဤဆောင်းပါးတွင်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြမည်, အဲဒါကိုကျန်းမာရေးနှင့်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားရန်ကောင်းမွန်သည်ထက်, parsley အမြစ်နဲ့တူလှပါတယ်။
အင်္ဂါရပ်များတစ်ဦး Diuretics ဆီးအဖြစ် parsley ကိုသုံးပါ
စက်ရုံ၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးတွင်၏ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်ဇီဝ-တက်ကြွစွာတ္ထုများ၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် parsley ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံ။ ဤဆောင်းပါးသည်တစ်ဦးအမွှေးအကြိုင်စက်ရုံရှိပြီးသော Diuretics ဆီးအကျိုးသက်ရောက်မှုမှမြှုပ်နှံနေသည်။ parsley parsley တစ် Diuretics ဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်အစားအစာစပ်အနံ့နှင့်စပ်အရသာကြွယ်ဝစေဖို့အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိစားဖိုမှူးကအသုံးပြုသောအကောင်းဆုံးလူသိများနှင့်အသုံးအများဆုံးအမွှေးအကြိုင်များနှင့်ရေနံကောက်ပဲသီးနှံ၏တဦးတည်းဖြစ်ခြင်းသည်လည်းဆေးဖက်ဝင်ကုန်ကြမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Parsley အမျိုးမျိုးသောဟင်းလျာများတစ်ရာသီအဖြစ်အသုံးများဖြစ်ပါတယ်။ ကနေပြုတ်ရည်များနှင့်လက်ဖက်ရည်ကိုခန္ဓာကိုယ်မှအကြီးအကြိုးခံစားခှငျ့ကိုရောက်စေနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအိမျမှာကစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်ကိုဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူလျှင်သင်သောက်ပျော်မွေ့ပြီးကုထုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ parsley ၏ပြုတ်ရည်နှင့်ဆောငျးပါးတှငျဆှေးနှေး၎င်း၏လျှောက်လွှာအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက။
သည်လျင်မြန်စွာကြီးထွားမှုကို parsley စိုက်ပျိုးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Parsley မရှိသောဥယျာဉ်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါကအမျိုးမျိုးသောဟင်းလျာများ၏အရသာကိုတိုးတက်စေရန်အသုံးပြုသည်သောအမြစ်ထုတ်လုပ်ရန်သီးနှံနှင့်မွှေးကြိုင်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်, အဖြစ်စိုက်ပျိုးသည်မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ အောင်မြင်စွာသူတို့၏အဆိုပါပြတင်းပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ဥယျာဉ်တော်၌အတွက် parsley ကြီးထွားဖို့ဘယ်လိုပေါ်သတင်းအချက်အလက်အဘို့, ကောင်းတစ်ဦးနှင့်အလျင်မြန်သောအမျိုးအနွယ်ကိုအပင်ပေါက်ရန်အတွက်သေချာစေရန်မည်ကဲ့သို့အောက်တွင်အသေးစိတ်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
အလှကုန်ရေခဲ Cube parsley မျက်နှာများ၏လျှောက်လွှာ၏အင်္ဂါရပ်များ
ချောမွေ့တဲ့နဲ့ taut အသားအရေအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအမြိုးသမီးတအိပ်မက်တွေ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူမကအချိန်တစ်နိမ့်ဆုံးပြုစုစောင့်ရှောက်အပေါ်ဖြုန်းဖို့လိုလားပေမယ့်အများဆုံးရလဒ်ရဖို့။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကောင်းစွာမျက်နှာကိုများအတွက်ပြည်တွင်းအလှကုန်ကိုကူညီပေးပါတယ်။ တချို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ဖြည့်စွက်စင်ကြယ်သောရေမှလုပ်အထူးသဖြင့်လူကြိုက်များရေခဲ Cube ။
ရောဂါနှင့်ပိုးမွှား parsley တိုက်ဖျက်ရေးနည်းလမ်းများ
တိုင်းဥယျာဉ်မှူးတစ်ဦးကြွယ်ဝသောနှင့်အရည်အသွေးသီးနှံရဖို့လိုလားပေမယ့်မပေးအမြဲထုတ်ပြန်သွားလေ၏။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များမကြာခဏထိခိုက်နေကြသည်ပိုးမွှားသို့မဟုတ်ရောဂါများတိုက်ခိုက်နေကြသည်။ သီးနှံထိခိုက်သည်ဤကံမကောင်း မှစ. , ဒါကြောင့်သင်ဟော်ရီကာချာပြဿနာများ၏အကြောင်းတရားများ navigate သူတို့ကိုဖြေရှင်းရန်အရေးယူနိုင်တော့မည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဖောကုသရန်ဖို့ parsley သုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
အဆိုပါအကျွမ်းတဝင်စိမ်းလန်းသောပစ္စည်းပစ္စယ parsley ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်၏အမွှေးအကြိုင်သို့မဟုတ်ပေးသွင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရောင်ရမ်းခြင်း၏ဤမနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်ရပ်ဆန်းနှင့်အတူကူညီပေးနိုင်သည်။ ဤသည်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုရိုးရာဆေးပညာအတွက်အသုံးပြုသည်။ ခြေထောက်အပေါ်အကူအညီနဲ့ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့အားရစရာအဖြစ်က၎င်း၏အသုံးပြုမှု, အသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦး contraindication ရောင်ရမ်းခြင်းလည်းမရှိသည့်အခါ, အဘယျသို့ parsley Learn အသုံးဝင်သည်။
အစောပိုင်းအဆင့် parsley ၏အကူအညီနှင့်အတူကိုယ်ဝန်အဆုံးသတ်ခြင်းလုပ်နည်း
တချို့ကဟင်းသီးဟင်းရွက်သားအိမ်ကျုံ့ခြင်းနှင့်သန္ဓေသားငြင်းပယ်ခံရသွေးဆောင်ကိုယ်ဝန်အစောပိုင်းအဆင့်ရှိနိုင်ပါသည်။ parsley ထိုအပင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သူမအကူအညီဖြင့်တစ်ဦးကိုယ်ဝန်ဖျက်ချစေဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိဟုတ်မဟုတ်၏မေးခွန်းကိုတွင်, ကြှနျုပျတို့သညျဤဆောင်းပါးအတွက်ဖြေပါ။ ဘယ်လိုကိုယ်ဝန်အမျိုးသမီးများနေ့ကာလအတွင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် parsley, အထူးသဖြင့်သားငယ်များ, ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ၏သဘာဝအနည်းလမ်းများပိုနှစ်သက်ပေ။
လစဉ်အရှိန်မြှင့်ဖို့ parsley ၏လျှောက်လွှာ၏အင်္ဂါရပ်များ
တိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏အလောင်းကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ပါသည်, ထို့ကြောင့်လစဉ်သံသရာအချို့အတော်လေးတည်ငြိမ်ဘူး။ တလတွင်ကာလ 24 ရက်အတွင်း, နှင့်အခြားသောအတွက်စတင်နိုင်ပါသည် - 30 ရက်အကြာမှာ။ အဆိုပါသံသရာအတွက်ခြားနားချက်နှင့်အကျိုးဆက်လ 2-6 ရက်အတွင်းနှောင့်နှေးလုံးဝသာမန်စဉ်းစားသည်။ အမျိုးသမီးတွေမဆိုအားဖွငျ့ menses သွေးဆောင်ခြင်းနှင့်ပင်သူတို့၏ရောက်ရှိအရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန်ကြိုးစားသောအခါသို့သော်အခြေအနေများရှိနေပါသည်။
အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများနဲ့ parsley ၏အစေ့ကို အသုံးပြု. ၏နည်းလမ်းများ
သို့သော်လည်းရှေးခေတ်ဂရိလူမျိုး parsley ၏ငြိမ်းစေလျက်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိလျှင်, ယခုကြောင်းအစိမ်းရောင်ရိုးရာဆေးပညာနည်းလမ်းတွေအမျိုးမျိုးအတွက်ရေပန်းစားသည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောကျော်ကြားမှုများသောအားဖြင့်ကျွဲနွားအစာကျွေးဖို့ပြင်သို့ပစ်လိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်သွားရသောဤစက်ရုံ, မျိုးစေ့တယ်မပေးပါ။ နှင့်အညီ, အချည်းနှီးဖွဲ့စည်းမှုအတွက်သူတို့ကရင့်ကျက်အရွက်ကနေလုနီးပါးချွတ်စွပ်အရွယ်အစားကြောင့်။
အေးနေတဲ့အတားအဆီးမဖြစ် - ဆိုက်ဘေးရီးယားအတွက်ငရုတ်ကောင်းပျိုးပင်စိုက်ပျိုးရန်လာသောအခါကိုသိ: မျိုးစေ့များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်မှု, အပွင့်လင်းမြေ၌စိုက်ပျိုးပြီးနောက်စိုက်ပျိုးဂရုစိုက်ဖို့လာသောအခါ၏အချိန်ကိုက်
အားကြီးသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အတူ Thermophilic ချယ်ရီ - တန်း Podbelskaya
အလှဆင် Hippeastrum: အိမ်မှာမျိုးစပါးစိုက်ပျိုးမှုနှင့်ရိတ်သိမ်း
ခရမ်းချဉ်သီး "Agatha" နဲ့ကရုဏာစပါးရိတ်ရာကာလ: ဖော်ပြချက်, ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဓာတ်ပုံတန်း
Minitractors များအတွက်အကြံအဖန်: အမျိုးအစားများနှင့်ရည်ရွယ်ချက်
စီ: ဖော်ပြချက်, စိုက်ပျိုးနှင့်စိုက်ပျိုးခြင်း
Copyright 2020 \_ အွန်လိုင်းလယ်သမားရဲ့စားကျက်